musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti genius nezita rezita "Mimmo". Yedu Domenico Berardi Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakaitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kwaDenico Berardi. Mufananidzo Credits: Sportmirtese, Castrumcropalatum uye SportsMole.
Ehe, munhu wese anoziva nezvekutenderera kwake uye ziso rechinangwa. Nekudaro vashoma chete ndivo vanofunga Domenico Berardi's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Domenico Berardi akaberekwa pazuva re1st raAugust 1994 kuCariati, guta riri mudunhu reCosenza mudunhu reCalabria kumaodzanyemba kweItari. Iye ndiye gotwe pavana vatatu akaberekwa kuna amai vake, Maria uye kuna baba vake, Luigi.
Domenico Berardi akaberekerwa vabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake. Mufananidzo Chikwereti: PxHere uye Sportmirtese.
Nyika yeItaly yerudzi rwevachena yaive nemidzi midiki inozivikanwa yakarererwa kuBocchigliero dhorobha reCosenza province kuItaly kwaakakurira pamwe nemukoma wake mukuru, Francesco uye hanzvadzi, Severina.
Domenico Berardi akakurira kuBocchigliero mudunhu reCosenza. Image Chikwereti: WorldAtlas uye Sportmirtese.
Kukurira mutaundi, Berardi haana kupfupika nezvikonzero izvo zvaizomupa mukana wekutamba nhabvu neshamwari dzake zuva nezuva revhiki. Dzimwe nguva ainyepedzera kurwara nemudumbu kuitira kuti aregedze chikoro nekunakidzwa nekutamba mutambo uyu.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kutenda kuberekwa mumhuri inofarira nhabvu, Young Berardi akanyoreswa muCastello nhabvu chikoro paMirto - hamlet yeCrosia, zvakare kuProvince yeCosenza, Italy - kwaakatora matanho ake ekutanga munhabvu yemakwikwi.
Domenico Berardi akatora danho rake rekutanga mumakwikwi ebhola kuCastello nhabvu chikoro. Mufananidzo Chikwereti: Sportmirtese uye TUON.
Paaidzidziswa paChikoro ichi, Berardi akadzidza uye airatidzira hunyanzvi hwaifananidza fomu rake rekukanganisa raiuya. Nekuda kweizvozvo, murairidzi wake aigara achipa nhengo dzechikwata kuti zvipfuure bhora kwaari nekuda kwezvinangwa zvechokwadi.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Panguva apo Berardi akange ave zera 13 mu2008, akaenda kune vamwe vake kuMirto kuti anyore kupinda mubhora rechikoro cheCosenza kwaaizopedza nguva pfupi yeupenyu hwake hwehudiki (2008-2010).
Domenico Berardi wekupedzisira kadhi rezita kiredhiti asati abatana naCosenza. Mufananidzo Chikwereti: Sportmirtese.
Pane imwe vhiki inoitika, Berardi akashanyira iyo yunivhesiti kambun'una wake Francesco kuBodena. Paaive pamisasa, akatanga kuita mutambo weChishanu-padivi nemunun'una wake pamwe nevamwe nhengo dzepayunivhesiti. Kusaziva kuna Berardi, pakanga paine scouts kubva kuna Sassuolo kumitambo uyo akacherekedza tarenda rake raibikwa.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Nekudaro, 16-makore-ekupedzisira Berardi akaunzwa kuSassuolo kwaakasimuka kuburikidza nemazita. Berardi akaita kubhuroka kwake kwechikwata chekutanga chechikwata pa27th yaAugust 2012 panguva yeSerie B vachipesana naCesena uye akaenderera mberi achibatsira divi rake kuti akwidziridzirwe kuna Serie A.
Kunyangwe kusimuka kwaBerardi kuburikidza nemapoka kunogona kurovera vakawanda nekukurumidza, zvaive zvisina sarudzo dzakaomeswa. Nhabvu anomhanya-mhanya aive nemapoka akawanda kuEurope achitsvaga signature yake. Nekudaro, akazviona sewakachembera uye akasarudza kupedzisa maitiro ekumuka kuSassuolo.
Domenico Berardi akaita sarudzo yekurambira paSassuolo kunyangwe achikwezva makirabhu akakura aine fomu rake raifadza. Mufananidzo Chikwereti: Castrumcropalatum.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Mumakore anotevera (2013 - 2015) Domenico yakaratidza kuve imwe yevashandi vechidiki veItaly vanovimbisa uye akahwina mubairo weumwe neumwe kusanganisira 2015 Bravo mubairo wechidiki akakurumbira webhola muEuropean.
Chii chimwe? akanyorwa katatu semumwe wevatambi vechidiki vepamusoro-100 munyika naDon Balón mu2013, 2014 uye 2015. Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Berardi ndiye Sassuolo's-all-time-yepamusoro-mutambi uye anotsvakwa zvakanaka mutambi uyo akakwevera zvido kubva kuRomani, Tottenham neLiverpool. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Domenico Berardi ndiye Sassuolo wepamusoro-soro wokuvavarira chinangwa panguva yekunyora. Image Chikwereti: BleacherReport.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Achifambira pane zvinhu zvine chekuita nehupenyu hwe rudo hwaDenico Berardi, mangani mazita awanogona kuwana mubhuku rake renhoroondo uye chii chinzvimbo chake chehukama panguva yekunyora iyi bio?
Kutanga, Berardi haazivikanwe kuti akambodanana nemukadzi chero iye asati asangana nemusikana wake akatendeuka kuve mukadzi wake - mukadzi waFrancesca Fantuzzi. Francesca akatanga kuona Berardi panguva yemitambo yevechidiki uye akazosangana naye kuburikidza ne Facebook. Ivo havana kunge vakaparadzaniswa kubva panguva iyoyo uye vanogona kugamuchira mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) chero nguva munguva pfupi iri kutevera.
Domenico Berardi ari mudiwa mudenga mudhindo nemukomana wake Francesca Fantuzzi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Domenico Berardi anotenda kubva kune yepakati-yemhuri mhuri yepamberi. Isu tinotaura chokwadi nezveupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaDenico Berardi: Luigi ndibaba vaBerardi. Luigi ave achidawo kuda kweInt Milan Berberi asati azvarwa. Nekudaro, ane nzvimbo yakapfava yeSassuolo inotambirwa nemwanakomana wake. Baba vanotsigira vevatatu vakabatsira kusimudzira kuda kwaBerardi kwebhola uye anoramba achimutsigira kusvika nhasi.
Pamusoro paamai vaDenico Berardi: Maria ndiamai vaBerardi. Iye mukadzi wepamba akabatsira kurera Berardi nevanun'una vake. Amai vanotsigira vevatatu vane zvekare zvinofarira munhabvu. Muchokwadi, iye anotsigira weJuventus FC uyezve, mukomana wake wechidiki weboka - Sassuolo.
Domenico Berardi akarererwa nevabereki vanozivikanwa zvishoma nezve. Mufananidzo Credits: ClipArtStudio uye TransferMarket.
About Domenico Berardi's siblings: Berardi ane vakoma vaviri vakuru. Ivo vanosanganisira mukoma wake Francesco uye hanzvadzi Severina. Kunyangwe zvisiri zvakanyanya kuzivikanwa nezvehama, ivo havasi vemitambo vebasa saBerardi. Nekudaro, vese vari vaviri vanoda bhora uye vanoteedzera mutambo nechido.
Pamusoro pehama dzaDenico Berardi: Kure kure nevemhuri yepedyo yaBerardi, kwete zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pababamukuru naamai vake nasekuru vake ivo babamunini, babamunini, hama dzemukoma, muzukuru uye nanabamunini vasati vachizozivikanwa.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Taura nezvehunhu hwaBerardi, iye anoshamisa anoshamisa anoratidza hunhu hwevanhu vakatungamirirwa naLeo Zodiac Sign. Mukuwedzera, Iye ari pakati nepakati, ane huchokwadi uye ane huchokwadi pasi pasi.
Mutambi anotaridza zvine mwero ruzivo nezve hupenyu hwake uye hwepachivande, ane zvinofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira F1 kumhanya, kufamba, kushambira, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuteerera mimhanzi uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri uye neshamwari.
Domenico Berardi ane zvido muF1 racing. Unogona kuona Charles Leclerc pamufananidzo? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Nezve nzira iyo Berardi anogadzira uye anoshandisa mari, yake net kukosha ichiri kuongororwa panguva yekunyora apo kukosha kwake kwemusika kumire pa € ​​20 mamirioni. Matunhu ehupfumi hushoma hwaBerardi anoenderera kubva kumabhizimusi ake emari.
Kunyangwe mutambi wacho asingakurumidzi kupfumisa hupfumi hwake nekuratidzira mota nedzimba dzakanaka, akakura kuenda kunodhura kunotenga nzvimbo kwaanoshandisa mari uye nguva yakanaka neshamwari dzake.
Domenico Berardi achiva nenguva yakanaka kunzvimbo inodhura yekutandarira neshamwari yake Marco Benassi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Domenico Berardi nhoroondo yehucheche uye biography yakanyatsoputira neinotevera inoderera kana zvishoma inozivikanwa chokwadi nezvake.
Chitendero: Domenico Berardi haana kukura pachinamato nepo pasina chero zviratidzo zvinongedzera kune zvaaitenda panguva yekunyora. Saka hazvigone kutaurwa zvakajeka kuti mutendi here kana kuti kwete.
Tattoos: Berardi anotora hunyanzvi hwemuviri sekuwedzera kwakawedzerwa kune ake akanaka chimiro. Saka, ane tattoo imwe huru kuruoko rwake rweruboshwe. Iyo tattoo inoratidza shati yeBerardi yenhamba 25 pane nyeredzi ine maruva. Pasi peiyo tattoo chinhu chakasungirirwa sechibvumirano netambo.
Domenico Berardi Tatenda kufambira mberi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kusvuta uye Kunwa: Domenico Berardi haazivikanwe kuputi panguva yekunyora. Zvikonzero zvehupenyu hwakadai hunogumira pane chokwadi chekuti nhabvu yemusikanzwa haina kurasa mabhenefiti awanikwa kubva pakurarama hupenyu hune hutano.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Domenico Berardi yeChikoro Chemwana uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.